China anyanwụ Refrigerator, anyanwụ ike Refrigerator, Obere anyanwụ Refrigerator Supplier
Nkọwa:Igwe Nri Igwe,Ike anyanwụ Igwe mmiri ntanetị,Obere Igwe Nbara Igwe Ntutu Igwe,Ịgba Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ,,
Igwe Nri Igwe,Ike anyanwụ Igwe mmiri ntanetị,Obere Igwe Nbara Igwe Ntutu Igwe,Ịgba Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ,,
Home > Ngwaahịa > Ụlọ igwe / DC > Igwe Nri Igwe
Ngwaahịa nke Igwe Nri Igwe , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Igwe Nri Igwe , Ike anyanwụ Igwe mmiri ntanetị suppliers / factory, wholesale high-quality products of Obere Igwe Nbara Igwe Ntutu Igwe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
China Igwe Nri Igwe Ngwa
Ndị na-eji ihe eji eme ihe eji eme ememe na-eji ọtụtụ omenala ike. Site na ọnọdụ dị ugbu a nke ike zuru ụwa ọnụ na nchebe gburugburu ebe obibi, mmepe nke refrigeeto dị ọcha ga-abụ ihe a na-apụghị izere ezere. Tụkwasị na nke a, enweghi ike itinye ọkụ eletrik na ike na Africa na ebe ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ na netwọk ike, ọ gaghị ekwe omume iji refrigerators iji chekwaa nri, na-enye ahịa nwere ike maka mmepe nke friji. Anyanwụ refrjiraeto tumadi gụnyere anyanwụ photovoltaic refrjiraeto na anyanwụ semiconductor refrjiraeto. Friji igwe na -adabere n'ụdị refrjiraeto jikọtara ya, nke a na-agụnye igwe nyocha, njikwa, accumulator na friji. Friji ahụ abụghị naanị ike anyanwụ kamakwa ihe ndị dị n'ụlọ. Ọ bụ ngwá ọrụ kachasị mma na mba ndị na-emepe emepe.